Abiy Oo Xaaladda Ku Adkaatay iyo Qadiyadda Tigrayga Oo Tagtay New York – Goobjoog News
Guddiga doorashooyinka dalka Itoobiya oo shir jaraa’id qabtay ayaa sheegay in ay heer gaba gaba ah mareyso tirinta codadkii la dhiibtay doorashada Itoobiya ee golaha wakiilada .
65% ayeey guddiga ku dhawaaqen in la tiriyay codadka doorashada ka dhacday dalka, marka laga reebo gobalka Soomaalida iyo Tigrayga .
Ciidamada TDF ayaa dhankooda wada qorsha ay ku sheegen in ay doonayaan in ay kula wareegan gobalka Amaxaarada .
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya iyo Maamulkiisa ayaana weli ka hadlin dhaqdhaqaaqyada ay wadaan TPLF, xilli xabad joonin uu codsaday ay ka diiday Jabhadda hubeysan .
Waaga cusub ee dagaal ee ka curtay dalka Itoobiya ayaa sabab u noqday in ay falan qeeyayaasha siyaasadda caalamka iyo kuwa wax ka qora siyaasadda dhulalka hodanka ah ee dhaaca qaaradda Afrika , in ay shaki geliyaan jiritaanka dowladnimada Itoobiya .
In kabadan 130 Qof oo Kuleyl Ugu Dhimatay Dalka Canada